Electric & New Energy Truck Refrigeration Unit ifektri abakhiqizi | SONGZ
Uchungechunge lwe-SE luhlobo lwefriji egcwele iloli kagesi egcwele evenini, iveni noma iloli ebisetshenziselwa ukuthutha ibanga elifushane noma eliphakathi.
Ukucaciswa kobuchwepheshe beLoli Refrigeration SE Series:
Imodeli SE200-T SE250 SE400 SE500
Amandla afanele I-DC300V≤ Imoto≤DC700V yokulinda kagesi AC220V I-DC300V≤ Imoto≤DC700V yokulinda kagesi AC220V DC300V≤ Imoto≤DC700V yokulinda kagesi AC380V / AC220V DC300V≤ Imoto≤DC700V yokulinda kagesi AC380V / AC220V
Ithempelesha Esebenzayo （℃） -25 ～ 20 -25 ～ 20 -25 ～ 20 -25 ～ 20
Ivolumu esebenzayo （m3） 5 ～ 8 6 ～ 10 12 ～ 18 14 ～ 22
Ivolumu Esebenzayo -18 ℃ （m3） 6 8 16 18
Amandla Okupholisa （W）
Uhlobo lwe-rotor oluvaleke ngokuphelele
Uhlobo lwe-rotor oluvaleke ngokuphelele (DC frequency conversion)
Amandla AC220V / 3 ～ / 50Hz AC220V / 3 ～ / 50Hz AC220V / 3 ～ / 50Hz AC220V / 3 ～ / 50Hz
I-Evaporator Ivolumu Yomoya （m3 / h） 900 1800 1800 1800
Isiqandisi R404A R404A R404A R404A
Ukushaja Ivolumu （kg） 1.1 1.2 1.5 1.5
Amandla （W） 1600 1700 2800 3500
Ukufaka Uphahla lubekwe yunithi yokuhlukanisa
Iyunithi ehlanganisiwe ebekwe phambili
Ubukhulu be-Evaporator （mm） 610 * 515 * 160 1291 * 1172 * 265 1400 * 1152 * 482 1530 * 735 * 675
Ubukhulu be-Condenser （mm） 1250 * 920 * 220
SE200 - T Imininingwane Yobuchwepheshe Imininingwane Yobuchwepheshe SE250 Imininingwane engu-SE400 yezobuchwepheshe
Ukwethulwa Okuningiliziwe Kwezobuchwepheshe Kochungechunge SE
1. Iyunithi eyodwa-in-one: Inyama yama-trailer amayunithi afanele ukulayisha izimpahla eziningi asetshenziswa kakhulu, okudinga ukwakheka okuhlangene nokugcinwa kahle.
2. Inzalo nobuchwepheshe bokuzihlanza: ukuthuthwa kwempahla kukhiqiza inani elikhulu lamagciwane. Iyunithi ene-UV ne-ozone sterilizer ingabulala amagciwane futhi ibulale amagciwane kuyo yonke inqola yokugwema izinto eziyingozi ezisalayo kanye nokugcina ukuphepha kokudla. Ngasikhathi sinye, izinqubo ezikhethekile zokuhlanza zisetshenziselwa ukwenza i-evaporator izihlanganise. Iqhwa liyancibilika ngokwalo, lihlanze ukungcola kobuso be-evaporator, ligcine i-evaporator ihlanzekile futhi ingabi nephunga.
4. Ubuchwepheshe bokuguqulwa kwemvamisa ye-DC: isebenzisa ubuchwepheshe be-sine wave obugcwele bokuguqulelwa kwemvamisa ye-DC ukulawula, ukusebenza kahle kwe-compressor kukhuphuka ngaphezu kwama-30% uma kuqhathaniswa ne-AC ejwayelekile yama-compressors we-AC fixed, ukuqinisekisa imayela lemoto.
5. Ukuthuthukiswa kwe-inverter compressor ye-R404A DC
Ukuthembela emandleni obuchwepheshe e-Songz, ithuthukise i-DC inverter compressor efakwe kusetshenziswa elikhethekile le-R404A lokusebenzela ifriji, elingazifeza izidingo zokubanda ngokushesha futhi lifeze inhloso yokusebenza kahle kakhulu, ukonga ugesi kanye nokulawula okuqondile kokushisa.
Ngenkathi okwamanje, amayunithi wefriji kagesi embonini yonke asebenzisa ama-AC fixed-frequency compressors. Lolu hlelo lunokusetshenziswa okuphezulu kwamandla, ukushintsha okukhulu kwezinga lokushisa egumbini, futhi alikwazi ukuhlangabezana nezidingo zokugcina.
6. Umlandeli ongenamabhulashi: Impilo yesevisi yomlandeli webhulashi iyanda isuka emahoreni ayizinkulungwane eziningana iye ngaphezu kwamahora angama-40,000, ukusebenza kahle kwabalandeli kukhuphuke ngaphezu kwama-20%, futhi ukonga amandla nokusebenza kahle kwezomnotho kuthuthukiswa kakhulu. Ukusetshenziswa kokulawulwa kokulungiswa okuqhubekayo, ngenzwa yengcindezi nenzwa yokushisa ukufeza ukusebenza kohlelo.
7. Ukuthuthukiswa kwesilawuli sesithathu
Hlanganisa okuguqula okukhona kwe-AC / DC-DC okukhona, okuguqula imvamisa, nezakhi zediski ezihlukanisiwe, yabelana ngamamojula asebenzayo angaphakathi, nokuklama isilawuli esinezinhlangothi ezintathu ngokuphepha okuphezulu, izinga lokuvikela eliphakeme (IP67), usayizi omncane, nomsebenzi wangaphambi kokushaja . I-EMC ingahlangabezana nezidingo ze-GB / T 18655 CLASS 3, futhi ibone ukuxhumana nayo yonke imoto ye-CAN ibhasi, ngomsebenzi wokuqapha okude.
8. Umklamo wokuphepha ophakeme
Ukufakwa kwamazinga amathathu: Ukufakwa okuyisisekelo, okusizayo nokuqinisiwe
Ukuvikelwa kweSoftware: Ukuvikelwa okungaphezu kwamandla amanje, i-over-voltage, under-voltage kanye ne-phase-loss
Ukuvikelwa kwamandla kagesi aphindwe kabili: Iswishi yamandla aphezulu kanye nedivayisi yokusiza ekucindezelweni okuphezulu
Idizayini yokuvikela umlilo: Izinto ezisezingeni eliphakeme ezingacimi umlilo, idizayini ephikisana nokubuyela emuva yama-electrode aqondile nalawo angafaneleki
Amacala Okusebenza Wochungechunge Lweziqandisi Zamaloli SE Series:
Langaphambilini Ngaphambili Egibele IDrayivu YamaLoli Eyisiqandisi
Olandelayo: Iyunithi Yokuqandisa Amaloli Ezizimele
Front egibele Direct Drive Truck Refrigeration ...